Tetikasam-pahaizana momba ny tetiky ny semicolon ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pahaizana momba ny totozy
Tetikasam-pahaizana momba ny tetiky ny Semicolon ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 3, 2016
Fantatrao ve ny antony mahatonga ny olona handeha tsikelikely amin'ny tatoazy antsipiriany maneran-tany? Misy hetsika iray! Eny, ny fihetsiketseham-peo mangina miaraka amin'ity tatoazy ity izay ny antony mahatonga ny ankamaroantsika no handeha amin'izany. Hihetsi-po ianao raha azonao hoe nahoana ireo tatoazy ireo no ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Taona maro lasa izay dia nanomboka naneho ny fitiavana sy ny fanantenana ho an'ireo izay niady ho an'ny tenany manokana, ny fiankinan-doha, ny famonoan-tena ary ny fahaketrahana ny Project Semicolon. Alao sary an-tsaina hoe ahoana no ahafahan'ny tatoazy toy izany mahatonga ny olona handresy ny ady manginy mangina. Fantatsika fa ny olon-drehetra mampiasa sigara dia mampihatra izany rehefa mamarana sazy izy ireo.
Tattoo semicolon ny dikany
Ny tattoo #semicolo dia mety ho kely nefa ny dikany dia zavatra goavana. Ny tatoazy dia misarika ny sain'ny maro ary ampiasaina ho toy ny fiankinan-doha, fahaketrahana, fahavoazana ho an'ny tenany, famonoan-tena ary koa ny finiavana hifindra amin'ny fiainana. Ny semikolon dia miresaka momba ny dikan'ny fiainana, mba hanome toky ny olona fa tsy tonga ny farany. Ankehitriny, lasa ny solaikolon'ny marika #tattoo fa ireo izay miezaka ny miaina ny fiainana dia mampahatsiahy ny tenany fa manana zavatra tokony hiainana izy ireo. Misy karazany hafa amin'ity tatoazy ity ary ianao no manapa-kevitra ny amin'ny fomba itiavanao ny paozinao. Amin'ny fiafaran'ny andro, ny semicolon dia maneho zavatra lehibe sy manan-danja izay azonao ankasitrahana.
Ireo izay voafidy dia afaka manoratra an'io tatoazy io mba hilaza amin'izy ireo ny momba azy ireo. Ny tatoazy dia malaza ary afaka manentana ny olona hanaraka ny nofinao. Afaka mahazo ny fitaomam-panahy ilainao ianao rehefa manoratra ireo tatoazy eo amin'ny vatanao. Mitaky momba ny fiandrianan'ny olona mandoko izany. Mitaky fanaraha-maso izany ary miresaka momba ny fisokafan'ny olona izay manana tatoazy.
1. Hazo seminera mahazatra tatoazy ho an'ny lehilahy eo amin'ny tendrom-barotra
Rehefa mampiasa tatoazy semicolon ianao, ny hafatra izay aloanao dia ny fanohananao na ny ady amin'ny tolona avy any anatiny. Amin'izao andro izao, ny tato-kaokolo halatra dia ampiasain'ireo fivavahana rehetra sy tsy mpivavaka izay vonona ny handray ny ampahany tsara kokoa amin'ny fiainany.
2. Marika sy semicolon tattoo ho an'ny ankizivavy amin'ny ankilany
Azonao atao ny manova ny ampahany aminao rehefa mandao tsatokosina ianao. Ny #design dia tsara tarehy ary tsy mitovy ianareo. Tsy haka fotoana na hipetrahan'ny habakabaka ny habakabaka.
3. Heart semicolon Tato-tato ho an'ny vehivavy eo amin'ny tendany
Efa namoy havan-tiana ve ianao ary mamono tena? Ny fampiasana an'ity tatoazy ity izay manentana ny sain'ny olona manerana izao tontolo izao ho an'ireo izay miady amin'ny fahasalamana ara-tsaina dia mety hanampy anao hahazo antoka fa afaka mandresy ianao.
4. Ankilemika tattoo design idea ho an'ny tovovavy
Amporisiho ny tenanao ary tanisao ity tatoazy ity izay ho toy ny fampahatsiahivana ireo ady izay tsy maintsy niady anatiny.
5. Semicolon Tato-tato ho an'ny vehivavy eo amin'ny tendany
Miaraka amin'ny tattoos semicolon, milaza ianao hoe 'afaka manohy ny fiainako aho.' Raha manana olona iray izay manosika fahasalamana ara-tsaina ianao dia aza misalasala mampirisika ny olona handeha ho an'io tatoazy io.
6. Lovers Tetikasam-panesoana tato ho an'ny ankizivavy
Ny endriky ny coli semi dia tena miavaka. Ho an'ireo izay tsy vonona ny handresy feo miaraka amin'ny tattoo azy ireo, dia mora ampiasaina izany.
7. Semicolon ary kintana tattoo design idea ho an'ny lehilahy
Manararaotra ny tato-peta-keviny ary lasa mpandresy.
8. Anjely sy tonon-tombo-tsavoka halatra eo amin'ny rantsantanana ho an'ny vehivavy
Ny hatsarana azo ampiasaina amin'ny fampiasana an'io tatoazy io dia mety ho faritana tsara indrindra raha manana izany eo amin'ny hoditrao ianao.
9. mpivady Tato ho an'ny tato-tato (tato) ho an'ny ankizivavy eo amin'ny rantsantanana
Hajao ireo very anao tamin'ny tatoazy. Nolavina ny hanosika ny alahelonao rehefa mijery ity tatoazy ity.
10. kitrokeliny tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy
Ny hafatra, ny hatsaran-tarehy ary ny fahatoniana hoentina amin'ny mpampiasa tatoazy dia tsipika.
11. Tato-tombo-tsavona tato ho an'ny tato-tato ho an'ny ankizivavy
Mialà dieny izao ary manaova ny tontolonao miaraka amin'ny tatoazy antsipiriany.
12. Simple semicolon tato ho an'ny vehivavy eo amin'ny tendany
Tags:tato ho an'ny semisol
tattoos armAnkle Tattooscompass tattooHeart Tattooshenna tattooraozy tatoazyanjely tattoosTatoazy ara-jeometrikatattoos crosselefanta tatoazytattoo infinitytattoo cherry blossomtattoos sleevetattoostattoos mpivadycat tattoostattoo watercolortattoos voronatattoo ideasarrow tattoorip tattoosloto voninkazotattoo eyemoon tattooseagle tattoostattoos ho an'ny lehilahydiamondra tattoofitiavana tatoazytattoo octopustattoos mahafatifatynamana tattoos tsara indrindratatoazy fokotattoos footlion tattoostatoazy lolotratra tatoazytatoazy ho an'ny zazavavymozika tatoazyscorpion tattootattoos backmehndi designtanana tatoazyTattoo Feathertattoos rahavavyNy zodiaka dia mampiseho tatoazytato ho an'ny vatofantsikamasoandro tatoazytatoazy voninkazotattooskoi fish tattoo